Ogaden News Agency (ONA) – Dhaq dhaqaaq Xoogan oo Kasocda Magalada London oo loogu jiro qaban qaabada Kulanka Ogadeniya Axada Soo Socota.
Dhaq dhaqaaq Xoogan oo Kasocda Magalada London oo loogu jiro qaban qaabada Kulanka Ogadeniya Axada Soo Socota.
Posted by ONA Admin	/ January 25, 2012
Waxaa dhaq-dhaqaaq xoogan wada Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadanka UK gaar ahaan magaalada London oo ku jirta qaban qaabo loogu jiro Shir lagu wado innuu qabsoomo Maalinta Axada ee 29.01.2012. Kulankaas oo ay kasoo qeyb gali doonaan Madax sare oo ka tirsan Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya oo uu kamidyahay Gudoomiyahu.
Hadaba dhaqdhaqaaqan xoogan ayaa waxa la kulanay xubno kamid ah Somalida Ogadeniya oo ku dhaqan wadanka UK. Waxayna noo sheegeen inay aad u daneynayaan inay shirkaas ka qeyb galaan soona dhageystaan gudomiyaha oo la filayo innuu qudbad kasoo jeediyo shirkaas. Waxa kale oo dadku aad u hadal hayaan madaxda Jabhada ee shirkaas kasoo qeyb gali doonta iyo aqoonyahanka shirkaas lagu marti qaaday.
Nin shirarka aad u taga ma ihi- waxaana filaya shirkii iigu danbeyay een nasiib u yeeshay inaan ka qeyb galo waxuu ahaa dhamaadkii sanadkii 2010kii shir somaliweyn loo qabtay halkaas oo aan dhageystay qudbadii gudomiyaha halkaas oo aan nasiib u helay inaan su’asheyda toos u weydiiyo Gudomiyaha. Mudo dheer ayaansan jaanis u helin inaan la kulmo gudomiyaha iyo madaxda Jabhada waxana jecelahay shirkaan inaan su’alo weydiin doono ka gadisan tii wagaas. waxa sidas yiri Khaliif oo ah nin muwaadin ah oo u dhashay dhulka somalida Ogadeniya.
Gudomiyaha Jaaliyada London Xuseen ayaa noo sheegay u jeedada shirkan loo qabanyo inay tahay mid lagu baraarujinayo shacabweynaha Somaliweyn maahan shir khaas ku ah Somalida Ogadeniya kaliya waxa uu u furanyahay dhamaan bulshada Somaliweyn. Waxaana shirkan ka hadli doona Aqoonyahan iyo siyaasiyiin kasoo jeeda shanta Somaliyeed oo ka hadli doona qadiyada Ogadeniya.
Maqaaxiyaha fadhi ku dirirka ah ee dadku isugu yimadaan ayaa hadal heynta shirkan sidoo kale ay ka socota waxaana dadka qaar kamid ah kuwa iinta leh ee lagu magacabo Dabo qoodhigu ay ku kaftamaan inay shirkan aadi doonaan. Nin ayaa noo sheegay innuu shirkan aad u jecelyahay innuu ka qeyb galo balse uu cabsi kaqabo dhalinyarada u adeegta halganka oo uu ku sheegay inay yihiin dhalinyaro dhiig kulul oo aan arki karin dadka Safarada Ethiopia kulamadooda ka qeybgalay. Waagi hore Shirarka noocan oo kale ah waan aadi jirnay oo waxba kuma jabneyn eega suurto gal maahan taasi.
Shirkan oo nidaamkiisa aad loo sugay- qabanqaabo xoogana ka socoto ayaa la filaya in Somalibadana kasoo qeyb galaan si gaar ahaaneyd dadka taageersan halganka shacabka somalida Ogadeniya.
Qofkii Faah faahin dheeraad ah u baahan waxa uu kala xidhiidhi kara xafiiska Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee London.